Third-Party Application များကို MacOS Mojave တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
Ignatius ခန်းမ | | MacOS US မှာရှိတဲ့ Mojave, လဲ tutorial
အများသုံး beta ပရိုဂရမ်ကို developer များနှင့်အသုံးပြုသူများအားသုံးလခန့်စမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် Cupertino မှယောက်ျားများသည်ယခင်ဗားရှင်းကဲ့သို့ကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သော operating system ဖြစ်သောနောက်ဆုံးပေါ် macOS Mojave ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 2012 ကနေထုတ်လုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သဟဇာတ။
သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း Apple သည်၎င်း၏ desktop operating system ၏လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သုံးစွဲသူများအား Mac App Store ကိုအသုံးပြုရန်တွန်းအားပေးရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် Third-party application များ၏ installation ကို Security ၏ထို option ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ခွင့်မပြုပါ။ နှင့် privacy options ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရိုးရိုး Terminal command ကိုမှတဆင့်, ငါတို့နောက်တဖန်ထို option ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
MacOS Sierra, Apple ထွက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ Mac App Store တွင်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသော developer များထံမှရရှိနိုင်သော application များကိုသာခွင့်ပြုပေးသည်။ အဆိုပါ Anywhere option ကိုသွားကြောင်းခဲ့သည်။ Mac App Store အပြင်ဘက်မှမည်သည့် application ကိုမဆို install လုပ်လိုလျှင်၎င်းကိုခွင့်ပြုထားသော developer များမှ ဖန်တီး၍ မရပါကအောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည်။
ပထမ ဦး စွာ Terminal ကို Launcher မှတဆင့်သို့မဟုတ် Command + Space key ကို နှိပ်၍ Search box Terminal တွင်ရိုက်ထည့်ရမည်။
နောက်အောက်ပါကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ sudo spctl –master-disable လုပ်ပါ
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ မာစတာ, တုံးတိုနှစ်ခုရှိတယ် (-), ဘယ်သူမှ။ ပြီးရင်ငါတို့အဖွဲ့ရဲ့စကားဝှက်ကိုရေးမယ်။
ထို့နောက် command မှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများအကျိုးသက်ရောက်ရန် Finder ကို restart လုပ်ရမည် Killall Finder
ထိုအခါငါတို့တက် ဦး System ကို ဦး စားပေး။
ကိုနှိပ်ပါ လုံခြုံရေးနှင့် privacy ။
နောက်ဆုံး option ကိုအတွင်းပိုင်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပ်များကိုခွင့်ပြုပါရွေးစရာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် ဘယ်နေရာမှာမဆို Developer ကို Apple မှယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိသော်ငြားလည်းအင်တာနက်မှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောတတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးရမည့်ရွေးစရာ။
အဆိုပါ Anywhere option ကိုပေါ်လာပါဘူးဆိုရင်သင်အရင်ကမလုပ်နိုင်သည့် application တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသာပြုလုပ်ရမည်။ ထိုအချိန်တွင် macOS က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ရန်ရွေးချယ်မှု (အရင်ကမပေါ်ပေါက်သေးသော option) ပေးမည်လားသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်စွာဖြင့် installation ကိုပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » MacOS Mojave တွင်တတိယပါတီအက်ပ်များကိုမည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Mojave တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။ သို့သော်သင် System Preferences ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပြီးလျှင်၊ ပြန်လည်စတင်ပြီးညွှန်ပြထားသော option ကိုဖယ်ရှားသည်
Martha Carvalho ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Ignacio ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် Ignacio ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုကျွန်ုပ်ရေတွက်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါ၊ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ မက်ကအဲဒါကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ ထိုအခါသင်သည်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုသွားပြီး၎င်းကိုသင်ဖွင့်လိုပါသလားဟုမေးသည်။ အဲဒီကနေ !! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Marta Carvalho အားစာပြန်ပါ
Mojave မှာperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းရဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတနေ့လုံးကြိုးစားနေတယ်၊ ​​MacOS Mojave 10.14.6 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့နည်းလမ်းလည်းမရှိ၊ ဘာမှလည်းမရှိဘူး၊ ဒါက Samsung Galaxy printer နဲ့ပါအရင်ကကြုံခဲ့ဖူးတာမရှိခဲ့ဘူး၊ hp ပရင်တာ
Lululook Ouluoqi ကြိုးကို Apple Watch အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကြိုးပေးခဲ့တယ်
Spark အီးမေးလ်ဂလိုင်းသည် MacOS Mojave တွင်အသစ်အသစ်သောအရာများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူနိုင်သည်